आफ्नै भाउजु बनिन सौता श्रीमान भाउजु भगाएपछी ……..भिडियो हेर्नुहोस – Sanjal Nepal
Homeसमाचारआफ्नै भाउजु बनिन सौता श्रीमान भाउजु भगाएपछी ……..भिडियो हेर्नुहोस
November 2, 2020 admin समाचार 5253
सुन्दरताको कारण भा’ईरल बन्दै कान्तिपुर टेलिभिजनकी समाचार वाचिका… हेर्नुहोस् पुरा फिचर ।।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला केहि न केहि भा’ईरल भैरहेका छन् । सामान्य व्यक्ति देखि कहिले कलाकार, कहिले पत्रकार, कहिले बाबाजी लगायत अन्य धेरै कुराहरु भा’ईरल भैरहेका छन् । यस्तैमा हालै समाचार बाचिका सामाजिक सञ्जालमा भा’ईरल भैरहेकी छन् । उनि नराम्रो पक्षले भन्दा राम्रो पक्ष अर्थात उनको सौन्दर्यताको कारण भा’ईरल भैरहेकी छन् । भा’ईरल हुदै गरेकी उनि कान्तिपुर टेलीभिजनमा समाचर प्रस्तोताको रुपमा कार्यरत छिन । उनि हुन् श्री पाण्डे । खोजि गर्दै जादा उनि टिकटकमा पनि लोकप्रिय रहेको पाईयो । उनलाई टिकटिकमा फलो गर्नेहरु १ लाख ८१ हजार बढि छन् भने उनले हालेका टिकटकहरुमा लाखौ भ्युज आएका छन् । श्री समाचार वाचिका मात्र नभएर एक राम्रो मोडल पनि हुन् ।
हिमालय टेलीभिजनबाट समाचर बाचन सुरु गरेकी पाण्डेले अहिले कान्तिपुरमा समाचार बाचन गछिन् । उनि करिब ३ बर्षदेखि समाचर बाचन गर्दै आएको छिन् । सानैदेखि क्यामाराको अगाडि काम गर्ने रुचाउने श्री अत्यन्तै सुन्दर पनि छिन् । उनले समाचार भन्दै गर्दाको तस्विरहरु सामाजिक संजाल फेसबुकको थुप्रै ग्रुपहरुमा यतिबेला छ्या’प्छ्या’प्ती भेटिन्छन । सानै देखि समाचार भन्ने सपना बोकेकी श्रीले करिब ४ बर्ष अगाडि म्युजिक भिडियोबाट मोडलिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले केहि म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरिन तर त्यसबाट उनलाई खासै खुशिको अनुभव भने गरिनन् ।
उनले अभिनय गरेको महसुस तिम्लाई गर्छु गीतलाई कमल खत्री र आरके खत्रीले गाएका छन् भने प्रचण्डकी नातिनी ले गएको भु’र्र भु’र्र बोलको गीत लगाएतका भिडियोमा पनि उनको कुशल अभिनय देख्न सकिन्छ । सानै देखि समाचार भन्ने सपना बोकेकी श्रीले करिब ४ बर्ष अगाडि म्युजिक भिडियोबाट मोडलिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले केहि म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरिन । साइन्स पढेको भएता पनि उनि काठमाडौं एमबीबीएस पढनको लगि आएपछि उनि आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा लागिन र अहिले सफल समेत बनिन् । श्री अहिले नेपालका टप लिडरहरु सगंको टक सो चलाउने तयारीमा छिन् । यो समाचार दि थ्री डटकम मा पोस्ट गरिएको छ ।
November 28, 2020 admin समाचार 3453
December 19, 2020 admin समाचार 2134
श्रीमान डेढ बर्षदेखि कोल’कोतामा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका डेढ बर्षिया छोरा पनि छन् । यसैबिच श्रीमती कसरी गर्भ’वती भइन् भनेर प्रश्न गरिनु सामान्य कुरा हो ।याे घट’ना भारतको जगदीशपुरमा घटेको छ । भाउजु गर्भ’वती
December 16, 2020 admin समाचार 4768
काठमाडौँ । १५ वर्षको उमेरमा नै विबाह गरेकी स्वस्तिका परियारको जीवनमा ठूलो ब,ज्रपात आइपर्यो । १५ वर्षमा नै प्रेम विबाह गरेकी स्वस्तिकाले सँग भागेर विबाह गरिन् । प्रेमी विशाल विश्वकर्मासँग भागेर विबाह गरेकी स्वस्तिकालाई उनका
LEX 18 agenda conversation: Job club (541158)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511682)
Hello world! (433335)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395892)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104063)